Tafiditra amin'ny tranokala avy amin'ny Semalt
Ny fitaovana maoderina dia mety amin'ny tranokala e-commerce sy ny fampahalalam-baovao amin'ny BestBuy, Walmart, eBay, Target ary Amazon tahaka ny tranonkala. Ity fitaovana ity dia manome fampahalalana marina momba ny vokatra iray ahitana ny lohateniny, ny famaritana, ny sary ary ny vidiny. Ankoatra izany, ny APT-nao dia manana API mora ampiasaina ary afaka miditra amin'ny tranonkala rehetra mora foana.
Fanodina fitaovana toy ny fitaovana mahomby azo ampiasaina:
Raha vao namorona tranonkala e-commerce ianao, dia azonao atao ny manangona vaovao momba ireo mpifaninana sy mpamatsy anao, ny vokatra, ny vidiny, ary ny sary. Azonao atao ny mijery mora kokoa ny tranokala e-commerce toy ny Amazon, Walmart, ary Ebay ary mahazo fampahalalana ilaina amin'ny fampiasana Product Scraper. Ity fitaovana ity dia miavaka satria manampy amin'ny fampitahàna ireo tranokala e-commerce isan-karazany, mahazo ny lisitry ny vokatra, sary, fanadihadiana ary fampahafantarana. Tsy toy ny fitaovana mahazatra hafa, ny mpangalatra vokatra dia mahazo ny angon-drakitra amin'ny fisiahana sy ny fampitahana ireo pejy web ao anaty aterineto ary manome anao ny antsipiriany momba ny mpivarotra sy ny mpamatsy. Noho izany, azontsika lazaina fa Product Scraper no mpanamboatra tranonkala e-commerce.
Ampiasao ny fitaovana entina hanaraha-maso ny vidin'ny vidin'ny solontenan'ny mpifaninana:
Nanjary sarotra ho antsika rehetra ny fivarotana vokatra samihafa an-tserasera amin'ny vidin'ny fifaninanana.Indraindray ny mpampiasa dia misavoritaka ny vidin'ny vidin'ny vokatra isan-karazany amin'ny aterineto. Amazon sy eBay dia miezaka ny mitazona ny vidiny amin'ny sehatra tsara ary mikendry ny hanintona mpanjifa maro kokoa. Ho fanombohana, ny fahazoana fampahalalana vokatra dia tena zava-dehibe. Amin'ny Product Scraper, mora ho anao ny mampitaha ny vidin'ny vokatra samihafa ary manatsara ny tranokalanao amin'ny fomba tsara kokoa. Ohatra, raha te-hanangona angona avy amin'ny vavahadin-tserasera na orinasa e-commerce ianao, dia tokony hanandrana avy hatrany ny vovobony. Ity fitaovana ity dia hanangona, handamina sy hanangona ny angon-drakitra ho anao amin'ny fotoana mahamety izany.
Ampiasao ny tanjon'ny Product mba hanombanana ny fivoaran'ny tsena:
Ireo tranokala e-varotra sy orinasa an-tserasera dia manara-maso tsy tapaka ireo mpiara-miasa aminy. Ohatra, Amazon dia manara-maso ny fivoaran'ny tsena ankehitriny ary manangona vaovao momba ny vokatra sy ny serivisy ao amin'ny BestBuy sy Walmart. Ankoatra izany, mampitaha ny vidin'ny vokatra sy ny vokatra miaraka aminy. Ny mpangalatra hoditra dia hahazo anao karazana fampahalalam-baovao ihany koa. Ity fitaovana ity dia hanampy amin'ny fitadiavana tombony azo tsapain-tànana ary hahatonga anao hijery tsara ho an'ny orinasanao. Ankoatr'izany dia hanome fanazavana momba ny fivarotan'ny mpifaninana aminy ny vokatra sy ny karazana fihenam-bidy an-tserasera an-tserasera.
Ny fitaovam-pandrafetana dia mamoaka vaovao marina momba ny mpamatsy:
Ireo tranonkala E-varotra sy fivarotana E-varotra dia manana mpaninjara mavitrika an-jatony. Amin'ny Product Scraper, afaka manangona vaovao momba ny mpamatsy maro ianao ary afaka mampitaha ny vokatra sy ny vidiny. Azonao atao ihany koa ny misintona ny angona avy amin'ny Amazon sy Ebay ary afaka mikaroka ny pejy web anao mifanaraka amin'izany. Ny mpandrindra sy ny mpandrindra ny tranonkala dia afaka mamorona lohan-drakitra misimisy amin'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra ary afaka manatanteraka asa maro mora.